Abantu abaningi bazama ukwenza abanye ekhaya lakho ukhululekile futhi amahle, lokhu houseplants eziwusizo kakhulu. Kodwa akufanele sicabange ukuthi azofika alinde buthule ku sill iwindi. ezifuywayo Green adinga ukunakekelwa okukhethekile futhi ukunakekelwa. By ezingezwakali kakhulu futhi kuyakhandla kweqiniso orchid izimbali. Transplanting ekhaya Kunenkolelo cishe njalo ngemva kweminyaka emibili, kodwa konke kuncike substrate. Ngokwesibonelo, uma imbali ehlwanyelwe enhlabathini zezinhlamvu amagxolo, kwelinye ebhodweni, uyozizwa omkhulu iminyaka emihlanu. Ukutshala orchid e moss, kufanele esikhundleni njalo ngonyaka. Futhi uma ingxenye ukhonkolo block, ukufakelwa wenziwa minyaka yonke uhhafu.
Ngokuhamba kwesikhathi, substrate is ohlangene, kahle esiwuhogelayo, kugcina umswakama aqoqana nosawoti wamaminerali, ngakho-ke kufanele kuthathelwe indawo. Ngaphezu kwalokho, kungase nje kumile orchid imbiza. Transplanting ekhaya ngokuvamile kwenziwa entwasahlobo, kodwa kukhona izimo eziphuthumayo, lapho izimpande ziqala ukubola, noma basuke ngakho zikhule ukuthi ukuphuma imbiza kanti amacembe phuzi futhi ewa, edalula stem. Kunoma ikuphi kubalulekile ukwazi izinyathelo eziyisisekelo inqubo ukugwema kokulimaza isitshalo.
Okokuqala udinga ukwehlisa imbiza for isigamu sehora emanzini ukuze kube lula ukuyikhipha ama-orchid. Ukufakelwa ekhaya kudinga ukunakekelwa okukhethekile ngoba uhlelo impande le mbali ibuthaka futhi ethambile. Uma ebhodweni plastic, kumelwe ngawakhamela kusuka ezinhlangothini ezahlukene, wawela umhlaba com, izimbali ubumba ube budisi khulu njengombana induku lokhuni kufanele uhlukane izindonga izimpande ingrown, ngezinye izikhathi ngisho babe ukuwuchitha.
Transplanting futhi kabusha orchid adinga indlela ekhethekile. Ngemva imizamo izimpande aphume imbiza kufanele nivuthulule phansi bese usule kubo ngu uhlambulule ngamanzi. Khona-ke kudingeka ucabangele ngokucophelela kubo, susa izindawo ayetha, zokukhipha igciwane tincetu indawo efafazwe upende oluhlaza noma oluyimpuphu carbon isebenze. Ukuze ama-orchid mncane out futhi okusakazwa ungaba. Lesi sitshalo izimpande futhi obuntofontofo umane ukuwela ebhodweni enkudlwana futhi agcwalisa substrate izakhi.
orchid zitshala ebhodweni ingilazi is hhayi Kunconywa, nakuba imibala kanye badinga ukukhanya luningi, kodwa kudingeka uphefumule. Ideal for them ezibhekwa Ababazi bakha obhasikidi, emangalisayo pass emoyeni. Kunoma ikuphi, ibhodwe kufanele kube nomuntu ukuvulwa cishe uhhafu umthamo isamba amanzi, ibekwe ama-orchid. Zitshala ekhaya eqala ukusatshalaliswa umfaniswano substrate phakathi izimpande. Inhlabathi umkhethe yini ekhethekile, engasindi futhi esiwuhogelayo, kumele iqukathe izinhlayiya Fern rhizomes, sphagnum moss, uphayini amagxolo polystyrene.
Substrate ngabe yikuphi kungenzeki ukuba abuqede, hhayi ukwehlisa umoya namanzi alo permeability. Ngezinye izikhathi, yonke izimpande kungukuthi afakwe ebhodweni, akufanele wabeka khona ngenkani, uzivumele ahlale phezu. Ukuze silondoloze nomswakama kunesidingo, kungenziwa wabeka phezu moss substrate. Emva ukufakelwa, inisele imbali akudingekile, umane fafaza amahlamvu futhi ushiye endaweni shady amasonto amabili, wabe esethunyelwa sill iwindi futhi bheka njengenjwayelo.
Indlela ukutshala onsundu izihlahla engadini yakhe
Juniperus "Alps Blue" - ikakhulukazi ezihlukahlukene nokunakekela imithetho
Tillet: izici begazi, ayelapha
Claudio Perez: incazelo, izici ukunakekelwa, umkhiqizo kanye nokubuyekeza
Lwesinaphi White - umquba oluhlaza, okuyinto ennoble inhlabathi
Amagilebhisi Straseni: ezihlukahlukene izici
Ungakhetha kanjani ukulwa nezicathulo?
Indlela ukupheka chickpeas? Indlela ukupheka chickpeas? Indlela ukupheka chickpeas e multivarka
Indlela ukudonsa esifubeni nakanjani ukulwela umumo omuhle!
IKhabhinethi emphemeni: ukhululekile futhi imfashini. Indlela ungatadishi emphemeni?
Kanjani yeseli ezinzwa? Amaseli isimiso sezinzwa
Sharia Court - obscurantism noma okunye?
Maternity Hospital №3, Chelyabinsk: izibuyekezo, izithombe, uhlu lwezinto
Kungani zishe isibani futhi kanjani ukulwa naso?
Umngcele wesikweletu - a ... Izinhlobo nezici wesikweletu imigqa
Usizo lokuqala for choking futhi ominzayo